Eto ianao: Home / Drivers / PowerDirector Video Editor Latest Version vaky
PowerDirector Video Editor Latest Version vaky
Jona 16, 2017 By Albert Trotter Leave a Comment
PowerDirector is no different from any other professional video editor software that you use on your PC to edit your videos. Misy lafin-javatra rehetra ny fanovana izay mitaky ny averina atao ny lahatsary mba ataovy fiadanana tsy hay hadinoina momba ny hoavy raha te Bika tsaroako ny lasa. PowerDirector Video Editor Crack has a powerful timeline video editing, ny sary lahatsary mpamoaka lahatsoratra, korontam-mangatsiaka malalaka lahatsary vokatra ary koa manana ny miadana-mihetsika vokany mba hahatonga ny lahatsary mampivarahontsana kokoa. Ny zavatra tsara indrindra momba io tonian-dahatsoratra no manome anao fa feo eo ihany koa ny manao sy mizara lahatsary ao amin'ny YouTube na haino aman-jery sosialy hafa mba ataovy haingana niparitaka be.
Mamorona miadana lahatsary ao amin'ny findainao mihetsika, rehefa tsy manana ny asa atao, dia nizara lahatsary hametraka samihafa ao anatin'ny iray mba ho lany sarimihetsika miaraka amin'ny endri-javatra tahaka ny fivakisana, hanodinana na horantsanantsika ny lahatsary amin'ny segondra vitsy. Ataovy ny sarimihetsika amin'ny HD toetra tsotra mampiasa fiovana, Video FX, ary ny voiceover. PowerDirector App manana lahatsary Adjustable haingana mba hamokatra miadana-mo tahaka izany dia nalaina tao amin'ny GoPro. Raiso lahatsary avy na aiza na aiza ary manomboka redoing azy ireo hanana mafy ny fampiharana ary tsy ela dia ho matihanina lahatsary mpamoaka lahatsoratra.
Ny rindrambaiko manana sary sy ny lahatsary haingana mpamoaka lahatsoratra amin'ny fanovana endri-javatra toy ny fizotry fanovana interface tsara kalitao. Afaka manampy amin'ny fizotry horonantsary ary manova azy ireo hahazo Mafy izany izay afaka aoriana mizara amin'ny namanao, and people. The people who often use Magisto, Final Cut sy iMovie hanana izany tena mora raisina rehefa mampiasa ity mpanao sarimihetsika mahery vaika.
The most often used features in most advanced editors are already present in drag-and-drop controls for images, teny, lahatsary sy ny vokany toy ny lahatsary tonian-dahatsoratra handefa anareo mampiditra vokatry ao amin'ny lahatsary miaraka amin'ny haingana paompy, ary afaka hanova ny lahatsary ihany koa ny soundscape.
Ny iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra momba io rindrankajy dia ny hoe afaka manao sary sy ny sary maro vokatry izay hamoaka ny tsara indrindra eo amin'ny sehatra. Azonao atao ihany koa ny mifidy ny mozika ny safidy ary ampio ny sary na horonan-tsary ao amin'ny tonian-dahatsoratra sy hanao fiaraha-miasa amin'ny izany.
PowerDirector Video Editor Crack has perfect voice and custom soundtrack capabilities with an adjustable audio volume. Azonao atao ihany koa ny manampy ny mozika sy ny feo fanao ny lahatsary mba hamela ny rehetra hahatakatra ny lahatsary.
Afaka Ahodina ny lahatsary na ny fivakisana, handrehitra na afaka ihany koa ny raki-tsary horantsanantsika ny ho tonga lafatra ny halavany na dia fitsingerenan'ny andro nahaterahana antoko na kisendrasendra fotsiny saha lavitra. Mety ihany koa ny lahatsary handefasana vokatra ampahany dia tsy ilaina ao amin'ny sarimihetsika.
Azonao atao ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny lahatsary hanitsy ny sarimihetsika le clip, ary mamorona ny miadana mihetsika izany mba hanaovana azy mampivarahontsana kokoa. Ny horonan-tsary dia azo hatsaraina amin mifanohitra sy ny famirapiratana ary ny saturation koa.
Rehefa avy manao ny video clip, dia afaka afa-tsy amin'ny finday avo lenta, ary koa afaka mampakatra ao amin'ny YouTube na Facebook na haino aman-jery sosialy hafa tsy handefa ny olona hahalala momba ny asa. Ny lahatsary azo natsangana ho 720p endrika na Full HD 1080p.
Vonjeo ary maka .apk amin'ny finday Android ny karatra SD.